မကွေးဧရာဝတီတံတားကြေး၆၀၀အစား၁၀၀၀ပိုတောင်းခြင်းနှင့် မင်းဘူးမြို့အဝင်ဘီးခွန်၂၀၀အစား၅၀၀ကျပ်အထိ ~ Myaylatt Daily.
7:18 PM သတင်း No comments
၂၀ရက်၊ဧပရယ်လ ၂၀၁၇ နံနက်ခင်း၆နာရီ ၁၀မီးနှစ်အချိန်ကပါ
မကွေးဧရာဝတီတံတားကြေး၆၀၀အစား၁၀၀၀ပိုတောင်းခြင်းနှင့် မင်းဘူးမြို့အဝင်ဘီးခွန်၂၀၀အစား၅၀၀ကျပ်အထိ သင်္ကြန်ကာလအပြီးတွင်ပိုမိုတောင်းခံသော "ကောင်းမွန်"ကုမ္ပဏီမှဝန်များအား ဥပဒေနှင့်အညီရှင်းပြပါသည် လုံးဝလက်မခံပါ ကျွန်တော်စီးလာသောကားမှာ ၁၃ယောက်စီး၎ဘီးကားသာဖြစ်ပါသည် မိမိကားရဲ့အခွန်ထက်ကျော်ပြီးကျွန်တော်မပေးနိုင်ပါ ကျွန်တော်ဥက္ကဌဂိတ်ပိုင်အဖြစ်တာဝန်ယူထားသော ကားဂိတ်တစ်ခုတွင်နေ့စဉ်ကားအစီးရေ၁၅စီးမှ၁ရက်လျှင် ကျပ်ငွေ၈သောင်းထက်မနည်း ၂သိန်းအကြားနေ့စဉ်လမ်း၊တံတား၊မြို့ဝင်၊၊ယကက၊ကြေးများပေးဆောင်လျက်ရှိပါသည် ၊ခွင့်ပြုချက်နှင့်ဥပဒေအထက်ကကျော်ပြီး ပိုမိုတောင်ခံလာပါက ကျွန်တော်ဘယ်တော့လက်မခံဘူးခဲ့ပါ သူတို့တောင်းဆိုကောက်ခံသောဈေးနှုန်း၁၅၀၀ကျပ်မှာ၃၅ယောက်စီး၆ဘီးကား၂၉ပေအောက်ဈေးနှုန်းဖြစ်သောကြောင့်သက်မှတ်ထားသောဈေးသာကောက်ခံဖို့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါသည် လုံးဝလက်မခံပါ အရင်လည်းဒီကား၁၅ယောက်စီးတွေကိုနေ့တိုင်း၈၀၀/၉၀၀ပေးနေကျကိုဒီနေ့မှထူးပြီးကျွန်တော် ကျွန်မပေးနိုင်ပါဘူး ငွေ၅၀၀တန်ဖိုးမများပါဘူး ဒါပေမဲ့ပြည့်သူ့ပိုက်ဆံကိုမတော်မတရား ပိုတောင်းပြီးခိုးတာမျိုးကို လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူး ။ ကျွန်တော်ဘက်မှပိုမိုပေးစရာမလိုကြောင်းကို အစိုးစရဖွဲရုံးမှာရှင်းလို့လည်းရပါတယ် လမ်းဦးစီးဌာနမှာရှင်းလည်းရပါတယ် မင်းဘူးထွေ/အုပ်ရုံးမှာရှင်းလည်းရတယ် အကိုတို့လိုက်ခဲ့ပါပြောတယ် လုံးဝမလိုက်နိုင်ဘူး ဒါရုံးမဟုတ်ဘူး ပိုက်ဆံတောင်းတဲ့ဂိတ်ကွဟုပြောပြီး ငွေမပေးနိုင်ရင်ကားရပ်ထားဟုပြောပြီးနောက်မှပါလာသောကားများခရီးသွားမိဘပြည်သူများကိုအခက်အခဲဖြစ်အောင်ပြောဆိုလာပါသည် ကျွန်တော်ခနစက်ရပ်ထားသည် ကျွန်တော်ပေးရမည်အခွန်အခတန်ကြေး၈၀၀ကိုကျွန်တော့ဘက်မှ၁၀၀၀ကျပ်တန်ပေးချေပြီးပါပြီ လုံးဝတံခါးဖွင်မပေးပဲပိတ်ထားပါသည် နောက်ကဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကသံပိုက်တစ်ချောင်းယူပြီးရိုက်ဖို့ပြင်တယ် အခြားတစ်ယောက်ကဆွဲလိုက်တယ် နောက်တစ်ယောက်ကကားဘေးကနေကျွန်တော်စကားပြောဆိုနေတာကို ဘယ်အချိန်ဝင်ရောက်လက်သီးနဲ့လိုက်မှန်းမသိပါ ကျွန်တော့အသားထိခါမှသိလိုက်ရပါသည် မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်စွာရမ်းကားသော မင်းဘူးအဝင်ဂိတ်မှဝင်ထန်းများမှာဒီတစ်ကြိမ်တင်မကပါ အရင်တစ်ခါကလည်းကားတစ်စီးကိုခဲနထုလို့ပြဿနာတတ်ပြီး ရဲစခန်းဝန်ခံကတိလက်မှတ်ထိုးပြီးသူများဖြစ်ပါသည်ဟု ရဲအရာရှိတစ်ဦးမှ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်လာရောက်ချိန်တွင် ထက်မံသတိပေးပြောဆိုသည်ကိုလည်းကြားခဲ့ရပါသည် ကုမ္ပဏီမှာဝန်ထမ်းအားလုံးအဆင့်ဆင့်အပြင် ပိုင်ရှင်သူဌေးကိုယ်တိုင်လာရောက်တောင်းပန်ပါသော်လည်း လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ ပြစ်မှု့ကြူးလွန်သူကိုတရားဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အဆင့်ထိ အောက်ခြေမှအဆင့်ဆင့်ဆက်လက်တိုင်ကြားသွားပါမည်
အဲဒီလိုလူမဆန်စွာကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားပြီးမှ လက်အုပ်ချီပြီးဝန်ချတောင်းပန်ချင်တာလိုလို ငွေအလျော်ပေးပြီးလာညှီချင်တာလိုလို အဲဒါမျိုးလက်ခံရအောင် ငါကဖာသည်မဟုတ်ဘူး ငါလုပ်တဲ့အရာတိုင်းကလူ့ကျင့်ဝတ်အညီသိက္ခာရှိရှိ တိတိကျကျ မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တဲ့သူတစ်ယောက်မို့ တရားဥပဒေနဲ့ပဲရှင်ပါမယ် ငါ့ဘက်ကမှားတာရှိရင်လည်းဥပဒေရဲ့အပြစ်ပေးတာခံယူပါမည် ၊ ကုမ္ပဏီဘင်မှကျွန်တော့မခိုင်းပဲ ဝန်ထမ်း၅ယောက်ဖြုတ်ပြလိုက်ပါတယ် ကျွန်တော်အထင်မကြီးနိုင်ပါ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းကိုတာဝန်မယူပဲ ခေါင်းရှောင်တဲ့သဘောသက်ရောက်နေပါသည် ၊သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှဆင့်ခေါ်မှာဒီကောင်တွေရောက်မလာဘူးဆိုရင် ကုမ္ပဏီကိုပါ ထက်ပြီး တရားခံဖျောက်ဖျက်မှု့နဲ့တရားစွဲပါဦးမည် လုပ်ပိုင့်အခွင်အရေးထက်ပိုပြီး ၊ပြည်သူ့ငွေအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ပိုမိုတောင်းခံခြင်းကိုလည်း ဆက်ဆုတ်ရွန်ရှာမှန်းတီးမိပါသည် ။ကျွန်တော့ဘက်ကလမ်းကြေးမပေးဘဲ ကားမောင်းသွားတာမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါ ကျသင်တန်ဖိုးပေးပြီးတာကိုတံခါးမဖွင့်ပဲ ပိုမိုတောင်းခံခြင်းသာဖြစ်ပါသည်
ဝေလျှံအောင် 09791090860 . 09440041007